सावधान – शरीरमा देखिने यस्तो दाग हुनसक्छ घातक !!
कहिलेकाहिं शरीरमा कालो वा गाढा निलो दाग देखिने गर्छ । कुनै जनवारले टोके जस्तै लाग्ने यस्तो दाग शरीरमा कसरी भयो ? हामीलाई आश्चर्य लाग्छ ।
के हो त यो ?भक्तपुरस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ रक्तक्यान्सर रोग एवं बोनम्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. अजय झाका अनुसार शरीरमा देखिने यस्ता दाग वा निल डाम आन्तरिक रक्तश्रावका कारण हुने गर्दछ ।
के हो प्लेटलेट्सको कमी ?
शरीरमा बोनम्यारो सम्बन्धि रोगहरु -ल्युकेमिया, लिम्फोम, माइलोमा, माइलोडिसप्लास्टिक, माइलाबाइबोसिस) भएमा पनि प्लेटलेट्सको उत्पादनमा कमी भई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुने गर्दछ । इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स सम्बन्धि रोग हो ।
किन हुन्छ शरीरमा प्लेटलेट्सको कमी ?
चोटपटक लाग्न नदिने,धारिलो हतियारको प्रयोग नगर्ने,चोटपटक लाग्ने खालका खेलकुदमा भाग नलिने ।
२०७८ श्रावण ७, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 187 Views